कम्युनिस्ट शासनको अनौठो चरित्र : ‘डन सांसद’लाई ३ दिनमै छाड्ने, गायिकालाई ४ दिन थुना ? - Mitho Khabar
January 28, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कम्युनिस्ट शासनको अनौठो चरित्र : ‘डन सांसद’लाई ३ दिनमै छाड्ने, गायिकालाई ४ दिन थुना ?
अभद्र व्यवहार मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । प्रहरीले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष उनलाई सात दिन हिरासतमा लिने गरी म्याद मागेकोमा सीडीओले चार दिन दिएका छन् । आस्थाको बयान सोमवार नै सकिएको छ । सामान्य विवादको विषयमा गायिका राउतमाथि फौजदारी मुद्दा चलाएपछि प्रहरीको कदम विवादमा परेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विमानस्थलको चेकिङको विवादलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको आलोचना गरेको भन्दै गायिका राउतलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको हो । मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको अभद्र व्यवहार मुद्दामा चार दिन थुनामा राख्ने अनुमति लिएर उनीमाथि अनुसन्धान सुरू भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । उनी बिरामी भएको भन्दै सोमबार बेलुका अस्पताल भर्ना भएकी छिन् । गत १ माघमा विमानस्थलको चेकिङमा प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप आस्थामाथि छ । त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै उनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने भएपनि प्रहरीले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको थियो । पछि आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै उनले फेसबुकमा प्रहरीको आलोचना गरेपछि प्रहरीले उनीविरुद्ध उत्रिएको हो ।
काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी महिला प्रहरीमाथि अन्याय भएकाले मुद्दा चलाउनु परेको बताउँछ । उनी भन्छन्, ‘गल्ती गर्नेहरू कानूनको दायरामा सबै आउँछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौं ।’ यसअघि फिल्मको आलोचनात्मक समीक्षा गर्दा प्रनिश गौतम तथा प्रहरीलाई गाली गरेर गीत गाएकोमा र्‍यापर भिटेनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरी आलोचित भएको थियो ।